‘म प्रतिस्पर्धाबाट नेता भएको हुँ, मतपत्र च्यातेर र पुलजम्प गरेर होइन’ – Nepal Press
‘म प्रतिस्पर्धाबाट नेता भएको हुँ, मतपत्र च्यातेर र पुलजम्प गरेर होइन’
केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री
२०७७ पुष १८ गते १०:५१
म दुई चारवटा तथ्यहरु यहाँहरुलाई भन्न चाहन्छु, म आज चुनावको अगाडि जो उभिएको छु । नेपालमा लोकतान्त्रिक वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक भनिएका दुईवटै शक्तिहरु ०१७ पछिको निरङ्कुश दमनले क्षतविक्षत भएको अवस्था थियो । काँग्रेसहरु केही जेलमा थिए, केही प्रवासमा थिए निर्वासनमा थिए बाहिर । आन्दोलन गर्न सक्ने हालतमा काँग्रेस थिएन ।
कम्युनिष्टहरु कि जेलमा थिए, कि निर्वासनमा थिए । ती टुक्राटुक्रा भएर बसेका थिए, छिन्नभिन्न भएर । यत्रो पार्टी त्यसबेला कसैको भएत ०१७ सालमै राजतन्त्र गुल्टिन्थ्यो नि ! ०१७ सालमै फ्याकिन्थ्यो । लोकतन्त्रलाई फाल्ने राजा, जनतन्त्रलाई फाल्ने राजतन्त्र त्यतिबेलै फालिन्थ्यो । तर, जनतालाई सचेत बनाइएको थिएन, संगठित बनाइएको थिएन ।
आफ्ना–आफ्ना पछि कुदेपछि केही पनि हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा जनताका शक्तिहरुलाई टुक्राटुक्रा पारेको अवस्थामा ५० वर्ष अगाडि हामीले एउटा नयाँ आन्दोलन, नयाँ अभियान सुरु गर्यौं । सही विचारका साथ अगाडि बढ्नु पर्छ । त्यसकारण पहिले आन्दोलनका निम्ति सही विचार टुङ्गो लगाउनु पर्छ ।
हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विचार टुङ्गो लगायौं । त्यसलाई प्राप्त गर्नका लागि त्यस विचारमा केन्द्रित परिवर्तनकारी, समतामूलक समाज निर्माण गर्ने विचार त्यसमा केन्द्रित भएको हो । सुदृढ संगठन, व्यापक संगठन आवश्यक छ । त्यसकारण हामीले व्यापक संगठन र सुदृढ संगठन निर्माण गर्ने अभियान सुरु गर्यौं ।
अलिक पर्याप्त अनुभव र अध्ययनको कमी, उमेरको पनि कमी अनेक कारणहरुले आन्दोलनमा केही कमीहरु पनि रहें । तर, त्यसको मूल पक्ष विल्कूल जायज थियो । जनताको हातमा शासन भएको, जनतामा सार्वभौमसत्ता रहेको, गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
वैशाखको चुनावमा केपी ओली पत्तासाप भन्नुभयो फेरि ! चुनाव हुँदै हुँदैन पनि भन्नु हुन्छ फेरि वैशाखको चुनावमा केपी ओली पत्तासाप पनि भन्नुहुन्छ ।
र, सामाजिक समानता सहितको, न्याय सहितको लोकतन्त्र हुनुपर्दछ र त्यो लोकतन्त्र सुशासन र आर्थिक विकासको बाटोबाट अगाडि जानु पर्दछ । र, वास्तविक गणतन्त्र, गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्र स्थापना हुनुपर्दछ । त्यसका लागि हामीले पहिले त जनताको शक्तिलाई मजबुत बनाउनु पर्छ भनेर आन्दोलनको एकीकरण, एकता, आन्दोलन विस्तार, संगठन निर्माण, विचारहरुको प्रचार सुरु गर्यौं र आन्दोलन अगाडि बढायौं ।
अलिक समय त्यसले धक्का पनि खायो । अरु विभिन्न प्रवृतिहरु पनि आन्दोलनमा निस्किए । विभिन्न प्रवृतिहरु पनि अगाडि बढें । त्यसपछि विभिन्न संगठित समुहरु पसन संगठित हुन थाले ।
विपि कोइरालाले कमेन्ट गर्नुभएको थियो, एउटा ठाउँबाट निस्किएको युवाहरुको एउटा साहसीक आन्दोलनले राष्ट्रिय राजनीतिमा यति प्रभाव पारेको छ भने कङ्ग्रेस पार्टी जस्तो संस्था सिथिल भएर बस्नु हुँदैन । त्यो उठ्नु पर्छ र त्यसले लोकतन्त्रका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ । म झापाका युवाहरुको नीतिसँग सहमत छैन तर उनीहरुको बलिदानसँग, उनीहरुको काम गर्ने भावनासँग सहमत छु र त्यो बलिदानलाई म प्रशंसा गर्छु, विपि कोइरालाले भनेका थिए ।
यसको अर्थ नेपाली काँग्रेसलाई पनि त्यस आन्दोलनले ऊर्जा दिएको थियो । एकता र एकीकरणको नयाँ सिलसिला त्यहाँबाट सुरु भयो । त्यस सिलसिलाले अनेक जागरण ल्यायो, अनेक समुहरु, अनेक संगठनहरु निर्माण हुँदै गए । एउटा धार, झापा आन्दोलनको धारका रुपमा अगाडि बढ्यो ।
बहादुर भवनबाट राष्ट्रपति भवन पुग्न सवा दुई महिना
त्यो झापा आन्दोलन, त्यसपछि कोअडिनेशन केन्द्र, त्यसपछि नेकपा माले, त्यस पछि एमाले हुँदै अगाडि बढ्यो । अर्को धार, न्यूक्लियस चौथो महाधिवेशन, मसाल कहिले माटो, कहिले पातलो विभिन्न ढंगले त्यो माओवादी विद्रोह भयो ।
र, हामीले सोच्यौं, विभाजित रहन दियो भने आफैँले आफ्नैविरुद्ध, आफैँले आफ्नै बीचमा खण्डनमण्डन जस्ता स्थितिहरु आफ्नै बीचको प्रतिस्पर्धाले आन्दोलनलाई एकजुट भएर परिवर्तनको पक्षमा लान मद्दत पु¥याउँदैन । त्यसकारण एकताबद्ध हुनुपर्छ ।
मैले त्यो सोचेँ, प्रचण्डजीसँग प्रस्ताव राखेँ । तपाईं कङ्ग्रेससँग मिलेर चुनाव लडेको थाहा छ हामीलाई छोरी जिताउन । छोरी जिताउन नसकेपछि मतपत्र च्यातेर प्रजातन्त्रको धुजाधुजा पार्ने । त्यसका लागि तपाईं काँग्रेससँग जानु भएको थियो । खासै उपलब्धि केही पनि भएन ।
हामी मिलौं । हामी मिलेर अगाडि जाऔं । हाम्रा संविधानका सर्वोच्ताका नीतिहरु, हाम्रा शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको कार्यदिशा यी कुराहरुमा अब सहमत भएपछि अलग्गैअलग्गै बसेर, अलग्गै जानु पर्ने अवस्था छैन । यो लोकतान्त्रिक प्रणाली मानिसके पछि, यो संविधान बनाइसके पछि, यस संविधान अनुसार अगाडि बढ्ने भइसके पछि, फरकफरक बसिरहनुको आवश्यकता छैन, मिलौं ।
चुनावमा मिलेर लडौं भन्ने कुरा उहाँलाई असाध्यै राम्रो लाग्यो । सुनौं, सुनौं लाग्यो । अझ मैले भन्दिएँ, भोलि मिल्ने भएपछि ४० प्रतिशत लिनुस् । उहाँलाई साह्रै सुन्दर कुरा लाग्यो, साह्रै राम्रो कुरा लाग्यो । हामीले एकताबद्ध भएर चुनाव लड्यौं ।
तपाईंहरुलाई थाहा छ, बहादुर भवन भनेको त्यहाँ कान्तिपथ जमलभन्दा उत्तर दरवारभन्दा पश्चिमपट्टि । त्यहाँको बहादुर भवनबाट मङ्सिर २४ गते आएको प्रतिनिधि सभाको चुनावको निष्कर्ष, त्यो निष्कर्ष राष्ट्रपति भवन पुग्न फागुन २ गतेसम्म लाग्यो । पैदल हिडेर जान दश मिनेटको बाटो ! सवा दुई महिना !
महाधिवेशन नगर्ने, एकपटक चुनाव नगर्ने, प्रतिस्पर्धा एकपटक पनि नगर्ने, प्रतिस्पर्धासँग डराउने, प्रतिस्पर्धा गर्न प¥यो भने हार्ने, हारेपछि मतपत्र च्यात्ने, त्यो इतिहासबाट आएको हो केपी ओली ?
सवा दुई महिना लाग्यो कम्तिमा । मैले त हेरिराखेको छु, के पाकिराखेको छ खिचडीमा । त्यतिबेला पनि चुनाव मसँग मिलेर लड्ने, ४० प्रतिशत लिएर लड्ने । कमलाकमला, राम्राराम्रा, मिठामिठा ठाउँ छानिछानि खाने । अनि सरकार बनाउन काँग्रेससँग वार्ता गर्ने र हामीसँग बार्गेनिङ गर्ने, मलाई त (काँग्रेसले) पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री दिन्छु भनेको छ । लाज लाग्नु पर्ने होइन ?
वामपन्थीसँग मिलेर चुनाव लड्ने, दक्षिणपन्थीसँग मिलेर सरकार बनाउने, कस्तो अचम्मको तरिका उहाँको ? त्यो छोडिदिउँ । फागुन ३ गते म प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले मन्त्री बन्न कोही एकजना पनि नपठाएको तपाईंहरुले देख्नु भएको छ ।
के पाकिराखेको थियो भित्रभित्र तपाईं अनुमान गर्न सक्नु हुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ । जहिले पनि म मित्रताले अङ्गाँलो हाल्छु, उहाँ धृतराष्ट्रले जस्तो अङ्गाँलो हाल्नु हुन्छ । अङगालो त अङ्गालो मारेको हो, धृतराष्ट्रले पनि अंगालो मारेकै हो । हाम्रो यही चरित्र । उहाँको ध्यान कसरी कब्जा गर्ने, कसरी हत्याउने त्यो मात्रै हुँदो रहेछ ।
मैले उहाँलाई अनेक सम्झाएँ, यो षड्यन्त्रकारी प्रवृति छोड्नुस् । यो जालझेल, षड्यन्त्र, तिकडमको राजनीति छोड्नुस् । राजनीति भनेको धोका र बेइमानी मात्रै होइन । त्यसैमा नकुदनुस् ।
उहाँहरु बहुमत छ भन्दै हुनुहुन्छ, के को बहुमत छ ? के को ? मैले एकताका लागि पार्टीभित्र माधव गुट छँदै थियो । मलाई थाहा थिएन र ? थाहा थियो नि । माधव गुट छ । फेरि प्रचण्ड गुट, उसलाई उत्तिकै सिट दिदाँखेरि दुईवटा मिल्दा बहुमत पुग्छ उता भन्ने मलाई थाहा थिएनँ र ?
अनि यति ५५/५६ वर्ष राजनीति गरेको ५० वर्ष अगाडिदेखि एउटा नयाँ आन्दोलन, एउटा नयाँ अभियान थालेर आएको मान्छेलाई यतिका तिकडम ! उनीहरुले औलामा थुक लगाएर यस्तो गरेर सार्न….।
मैले त नबुझेको जस्तो गरेर चुप्प लागेर बस्नु परेको थियो । मेरो थुक यता औलामा सर्यो देख्यौं ? कस्तो जाँदु भयो । यस्तो जाँदु उहाँहरुले धेरै देखाउनु भयो । ए, अँ हो भन्दै बसेँ । तर, मैले देखेको छु, औला सट्ठसट्ठट सारेको । उहाँहरुलाई मैले दिएको त्यो सङ्ख्या एकताका लागि दिएको थियो ।
एकीकरणका लागि दिएको थियो । यो देश बनाउनका लागि दिएको थियो । संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि दिइएको थियो । स्थायित्वका लागि दिइएको थियो । स्थिरताका लागि दिइएको थियो । देश अगाडि बढाउनका लागि दिएको थियो । तर, उहाँहरुले त्यो बहुमत आफ्ना स्वार्थका लागि प्रयोग गर्नुभयो । अपमान.. (लामो स्वरमा माधव नेपालाई संकेत गर्दै) गरियो । मान पाइनँ मैले (लामो स्वरमा माधव नेपालाई संकेत गर्दै) । यसैका लागि ..।
कति पटक सम्झौता गर्नुप¥यो । मेरो एउटा बिफ्रकेस भरिएको छ प्रचण्डसँगका सम्झौताले । कतिवटा सम्झौता गर्ने ? आज सम्झौता ग¥यो, भोलिपल्ट काम छैन । फेरि अर्काे दिन सम्झौता गर्यो अर्को दिन काम छैन ।
तपाईंहरुले सुन्नु भयो, एक दिन आउनु भयो आधाआधा गर्ने भनेको थियो, तपाईंले चलाउनुस् प्रधानमन्त्री । जनताले स्थायित्व चाहेका छन् । तपाईं नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने चाहेका छन् । त्यो मैले बुझेँ । अहिले म प्रधानमन्त्री हुन खोज्दा राम्रो मानेनन् जनताले । मलाई कार्यकारी अध्यक्ष दिएर काम गर्न दिनुस् पार्टीमा ।
तपाईं नै प्रधानमन्त्री भएर चलाउनुस् । प्रथम अध्यक्ष त तपाईं हुँदै हुनुहुन्छ, उहाँले आफैँले भन्नुभयो । मैले भनेँ, सचिवालयको बैठकमा प्रस्ताव राख्नुस् । उहाँले सचिवालयको बैठकमा आफैँ प्रस्ताव राख्नु भयो । मैले हुन्छ भन्दिएँ । भोलि पल्ट मैले गल्ती गरेछु कि क्या हो कमरेड भन्नुभयो । गल्ती गर्नु भयो भने फेरि अर्को दिन सही निर्णय प्रस्ताव राख्नुस्, सच्याउनुस् । के निर्णय चाहिएको थियो, त्यो सच्याउनुस् ।
महाधिवेशन अलिक अगाडि नै गर्नुपर्यो । जहिले सकिन्छ त्यहीले गरौं नि त । जहिले सकिन्छ, त्यहीले गरौंन भनि सकेपछि गत वर्ष माघ १४ देखि १९ सम्म भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले आगामी महाधिवेशन २०७७ साल चैत २५ गतेदेखि ३० गतेसम्म गर्ने फैसला गर्यो, उहाँकै अध्यक्षतामा ।
म बैठकमा पनि बसेको थिइनँ । उद्घाटनमा आएँ, समापनमा आएँ, बाँकी उहाँलाई छोड्दिएँ । उहाँले नै सबै पास गरेको हो । फेरि पास भइसके पछि विधान संशोधन गरियो । नछापौ कि क्या हो यो विधान भन्नुभयो । केन्द्रीय कमिटीबाट पारित गरिसकियो । उहाँको अर्को कुर्न भएको…पदका लागि ।
जता जानु पर्ने त्यता उहाँहरु कहिल्यै हिँड्नु भएन । तीन महिनाभित्र टुङ्ग्याउने एकीकरण भनेको अडाइ वर्षमा टुङ्गिएन । त्यता विचार नै गर्नुहुन्न । सरकार असफल भयो, सरकार असफल भयो, कराएको कराइ गर्नुहुन्छ । संवैधानिक आयोगमा मान्छे नियुक्ति गर्न बैठक नै बस्न मान्नु हुन्न । बैठक नै बस्न मान्नु हुन्न ।
अन्तिममा मैले आजित भएर अध्यादेश निकाले । अब मान्छु, अब खुरुखुरु सहमति साथ गर्ने भन्नुभयो । फिर्ता लिइदिनुस्, मान्ने अब सहमति साथ, फिर्ता लिएका भोलिपल्टबाट फेरि छैन । यस पल्ट फेरि मैले अध्यादेश जारी गर्नै पर्ने भयो । अध्यादेश जारी गरेपछि उहाँले कपटपूर्ण ढंगले भन्नुभयो, यो अध्यादेश फिर्ता लिइदिनुस् ।
उहाँहरु म माथि अविश्वासको प्रस्ताव, राष्ट्रपति माथि महाअभियोगको प्रस्ताव, अरु विभिन्न संस्थाहरु माथि महाअभियोगको प्रस्ताव ! यो त लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, संस्थाहरुको मर्यादा केही नराख्ने सबैलाई । यो लोकतन्त्र, गणतन्त्र भन्नै नहुने रहेछ, कामै नलाग्ने व्यवस्था रहेछ भन्ने पार्ने ।
उहाँ अहिले पनि भन्नुहुन्छ, खसीको टाउको झुण्डाएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ । खासमा त्यसो भन्नुहुन्छ, तर अरु कसैले सुन्लान कि भनेर कोही छन् कि भनेर हेर्नुहुन्छ । उहाँलाई बजारमा फेरि अर्कै कुरा बेच्नु परेको छ । उहाँ अहिले महान शान्तिवादी देखा पर्नु भएको छ । महान परिवर्तनकारी देखिनु भएको छ । महान जनताको पक्षधर देखिन खोज्नु भएको छ ।
उहाँले युवाहरुलाई सेन्टिमेन्टमा ल्याएर, आन्दोलनमा होमेर कतिका हात छैनन्, कतिका खुट्टा छैनन् । कति शरिरमा गोली बोकेर, कसैको कम्मरको ढाडको हड्डी फुस्किएको छ, भाँचिएको छ । विस्तारा परेका छन् । त्यस्तो जिन्दगी बिताउन कति कठीन हुन्छ, उहाँलाई के थाहा । उहाँ त आफ्नो पोष्टका लागि मरिमेट्नु भएको छ । आफ्ना परिवारका लागि मरिमेट्नु भएको छ । मैले धेरै भनिरहनु पर्दैन ।
त्यही उहाँको आफ्नो स्वार्थ केन्द्रित प्रवृतिका कारणले उहाँ देशप्रति अत्यन्त गैरजिम्मेवार हुनुहुन्छ, जनताप्रति । हिजो आफूलाई साथ दिने साथीहरु, लड्ने बेलामा युवाहरु चाहिए ।
म तपाईंहरुलाई सम्झाउन चाहन्छु, लोकेन्द्र बिष्ट । एउटा योद्धा । कृषि गर्नुस्, ठीक छ । आन्दोलन नै छोडेर कृषि गर्नुपर्ने थिएन । तर, त्यो योद्धाको मन नै उहाँले भाँचिदिनु भएको छ । त्यसकारण कहिले कालो धान उर्मान जानु हुन्छ, कहिले ड्रागन फुट उर्मान जानु हुन्छ ।
हिजो उहाँलाई कालिबहादुर खामहरु चाहिन्थ्यो, आज खोई कालिबहादुर खाम कहाँ छन् ? किन चाहिदैँन उहाँलाई कालिबहादुर खाम ? हिजो उहाँलाई बचाउन, उहाँलाई जिताउन ज्यान दिने हजारौंका परिवारको के अवस्था छ ? ती बेसाहारा भएका बा आमाहरुको अवस्था के छ ?
उहाँलाई चिन्ता छ ? टुहुरा टुहुरी भएका केटाकेटीहरुको उहाँलाई चिन्ता छ ? उहाँका परिवारका नातागोता…म धेरै केही भन्न चाहन्न । तपाईंहरु आफैँ देख्नु भएको छ, भोग्नु भएको छ । म धेरै केही भन्न चाहन्न ।
माधव नेपालजीको सम्बन्धमा त मलाई खास टिप्पणी नै गर्नु पर्ने छैन, किनभने उहाँ प्रचण्डको एउटा मामुली कार्यकर्ता हो । उहाँ कार्यकर्तामा जानु भएको छ । (लामो स्वरमा माधव नेपाललाई संकेत गर्दै) मलाई पदको लोभ छैन ….तर मलाई उधारो हुँदैन, नगद । उधारो म पत्याउँदिन । हाताहाती चाहिन्छ नगद । नगद के रहेछ भनेको त द्धितीय अध्यक्ष । द्धितीय अध्यक्ष !
एउटा खास परिस्थितिमा हामीले दुईवटा अध्यक्ष बनाएका थियौं । एमालेको अध्यक्ष, माओवादीको अध्यक्ष दुईवटा मिलाएर अध्यक्ष बनाएका थियौं । दुईवटा अध्यक्ष हामीले आन्दोलनलाई एकीकृत गर्नका लागि । आन्दोलन फुटाउन पनि अध्यक्ष दुईवटा तीनवटा चाहिन्छ ? जुटाउन पो हामीले बनाएका हौं ।
फुटाउन पनि दुई तीनवटा अध्यक्ष ! किन चाहियो ? तर, मन भनेको अचम्मैको हुँदो रहेछ । न सभापति हुन पाउने, सभापति पनि प्रचण्डले नै चलाउनु भयो । छेउमा बस्न पाएकै थियो । फेरि सभापति अध्यक्ष नै नभइनहुने किन हो, त्योचाहिँ मैले बुझेको छैन । उहाँको बारेमा म कुनै कमेन्ट नै गर्दिनँ । विचरा दुखी मन गराउनु होला..। उहाँको मैले खास कमेन्ट गर्नु छैन ।
अलिक पछि, अलि पछि समय कति लाग्छ म भन्न सक्दिनँ । हुनत उहाँहरुले वैशाखबाट ओली सिद्धियो भन्नु भएको छ । उहाँहरुको भविष्यवाणी कस्तो नमिल्ने नमिल्ने खालको गर्नुहुन्छ भने ! पोहोर म बिरामी परेँ, अब मरिहाल्छ भन्नुभयो । त्यो पनि मिलेन ।
पोहोर परार म बिरामी परेँ, बैङ्कक गएँ उपचार गराउन, काठको बाकसमा फर्किन्छ भने । म त प्लेनको सिटमै बसेर आएँ । अस्ति मलाई आकस्मिक रुपमा इन्फेक्शन भयो, अप्रेशन गर्नु प¥यो । अप्रेशन कहिले कहिले जटिल हुन्छ । अब गयो ! गयो भनेर खुशी मनाउनु भयो ।
उहाँहरुको भविष्यवाणी हुने खालको गर्दै गर्नुहुन्न । म मर्न त मर्छु एकदिन । मरिहाल्छु । उहाँहरुको आकाङ्क्षा पूरा हुन्छ । अगाडि पछाडि कसको के यो अहिले, टुङ्गो हुँदैन प्रकृतिको । तर, म चाहिँ एकदिन मर्छु । तपाईंहरुलाई सुन्न राम्रो लाग्दैन, म मर्छु भन्ने कुरा । तर, मर्छु सत्य हो ।
मान्छे मरोस् भन्ने कल्पना विरोधीलाई, शत्रुलाई पनि गर्नु सभ्यता होइन, गर्नु हुँदैन । विरोधीको पनि स्वास्थ्य लाभको कामना गरिन्छ । मैले लड्नु छ भने एउटा अशक्त, कमजोर, रोगीसँग लड्न चाहन्नँ । अलिक मजबुत पाखुरा भएको बलियो, राम्रै मसलदार, खेल्न जानेकै छैन भने खेल्न मज्जा आउँछ ? त्यसकारण ….सुस्वास्थ्यको कामना गरिन्छ उहाँहरुको ।
एउटा उहाँहरु भन्नु हुन्छ, चुनाव हुँदै हुँदैन भनेर । वैशाखको चुनावमा केपी ओली पत्तासाप भन्नुभयो फेरि ! चुनाव हुँदै हुँदैन पनि भन्नु हुन्छ फेरि वैशाखको चुनावमा केपी ओली पत्तासाप पनि भन्नुहुन्छ ।
म उहाँहरुलाई भन्न चाहन्छु, तपाईंहरुले पनि केही सिट ल्याउनुस् भन्ने मेरो शुभकामना छ । केही सिट ल्याउनुस् । तर, त्यसका लागि अहिलेदेखि तयारी गर्नुस् । यो सडकमा गएर बेकार अलकत्रमा बसेर कपडा बिगारेर ..। घाम लागेको बेलामा अलकत्रमा बस्नु भएको छ ! कपडा बिर्गानलाई ।
अचम्म के भने, लोकतन्त्र आइसक्यो । उहाँहरुले नै भनेको होइन अस्ति नै, अब सडकमा गइरहन पर्दैन । अब लोकतन्त्र आइसक्यो । सदनबाटै सबै काम गर्न सकिन्छ । लोकतन्त्रको एउटा राम्रो, सबैभन्दा आधारभूत कुरा के हो लोकतन्त्रको ? समयसमयमा आवद्यिक निर्वाचन ।
समय समयमा जनताका बीचमा जाने, जनताबाट ताजा जनादेश लिने, जनताबाट अनुमोदित हुने त्यो हो लोकतन्त्र । उहाँहरु परपर भित्तो हान्नु हुन्छ सिगौंरी खेल्न । भुइँ खोस्रिनु हुन्छ । नजिकै आएर भिड्न डराउनु हुन्छ । परपर सिगौरी खेल्न सजिलो छ । उहाँहरु सिगौरी खेलेर हिड्नु हुन्छ ।
कहिले माइतीघर मण्डलामा, कहिले प्रदर्शनी मार्गमा सिगौरी खेलेर हिँड्नु हुन्छ । एक्लै सिगौरी खेल्दाखेरि कुनै खतरा हुँदैन, राम्रो छ । चुनावमा भिडेका बेला उहाँहरुलाई थाहा हुनेछ, जनताले मतदान गरेका बेला थाहा हुनेछ । मेरो सुझाव छ, केही सिट तपाईहरु पनि जित्नुस्, जित्नु छ भने अहिलेदेखि चुनावको तयारीमा लाग्नुस् ।
संविधनअनुसार संसद विघटन गरेको हुँ
उहाँहरु हल्ला गरिरहनु भएको छ कराएर । संसद पुनःस्थापना हुन्छ । संसद पुनःस्थापना संविधानले मिल्दैन । संविधानले मिल्ने भए पुनःस्थापना हुन्थ्यो । संविधानले मिल्दैन । ६४ प्रतिशत बहुमत भएको सर्वसम्मत बहुमतको नेताले अहिले विघटन भएपछि को कता छ, के छ, त्यो बेग्लै कुरा होला । जतिबेला मैले विघटनको सिफारिस गरेँ, त्यतिबेला संसदको ६४ प्रतिशत बहुमतको सर्वसम्मत नेता हुँ म । त्यस हैसियतले मैले सिफारिस गरेको छु, विघटनको ।
अब बाँकी ३६ प्रतिशतमा विकल्प बन्छ ? विकल्प भनेको बहुमत चाहिन्छ । विकल्प भनेको ५२ प्रतिशत चाहिन्छ त्यहाँ । ५१ प्रतिशतबिना सरकार बन्दैन । सरकार बन्ने विकल्प छैन भने संसद पुनःस्थापना के का लागि हुन्छ ? अस्थिरताका लागि ? तमासाका लागि हुन्छ ? संसद पुनःस्थापनाको सम्भावना छैन ।
कतिले भन्छन् फेरि,संविधानमा विघटनको कुरै लेखेका छैनन् । धारा ७६ को उपधारा ७ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नेछ र नयाँ निर्वाचनका लागि मिति तोक्ने छ । नयाँ मिति तोक्ने कुरा राष्ट्रपतिले तोक्ने त्यसमा व्यवस्था छ ।
पाँच वर्ष अगाडि संसद विघटन हुनै सक्दैन भन्नुहुन्छ उहाँहरु । धारा ८५ ले भन्छ, अगावै विघटन भएमा बाहेक संसदको अवधि ५ वर्षको रहनेछ । अनि राजनीतिक आग्रह देखाएर हुन्छ ? संविधानमा के व्यवस्था छ हेर्नुपर्यो । दुनियाँको अभ्यास के छ हेर्नुप¥यो । बेलायतमा लिखित संविधान छैन । तर, अस्ति भर्खर संसद विघटन भयो, निर्वाचन भयो । निर्वाचन हुँदैन ? संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको प्रेरोगेटिभको प्रणाली ।
अब चुनाव हुँदैन, के न हुन्छ, बर्बाद हुन्छ, संविधान जान्छ, व्यवस्था जान्छ, गणतन्त्र जान्छ । तपाईंहरु भन्नुस् त के संविधान जान्छ, चुनाव गर्दा ? चुनाव गर्दा गणतन्त्र जान्छ ? चुनाव गर्दा लोकतन्त्र जान्छ ? केही पनि जाँदैन । चुनाव गर्दा लोकतन्त्र मजबुत हुन्छ । जनताले आफ्नो ताजा फैसला दिन्छन् । र, साथीहरुलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईंहरु ढुक्कले यो देशलाई अन्धकारमा पर्न नदिने, अल्मलमा फस्न नदिने शक्ति हामी हौं । हामीले अलमलमा फस्न दिनु हुँदैन ।
म तपाईंहरुलाई भन्न चाहन्छु, हामी नभएको भए संविधान बन्दैनथ्यो । तपाईं हामीले देखेका छैनौं ? कसरी हामी अडिनु परेको थियो, कसरी हामीले अरुलाई अडाउनु परेको थियो । यदि हामी नभएको भए नाकाबन्दीको सामना डटेर कसले गर्न सक्थ्यो ? कसैले पनि गर्न सक्दैन्थे ।
नेपाल एउटा सार्वभौम सम्पन्न, स्वतन्त्र राष्ट्र तर यो देश एउटा देशबाट घेरिएको थियो भूपरिवेष्ठितका नाममा । अर्कोतिर पनि छिमेकी छन्, त्यतातिरबाट पनि बाटो खोल्न सकिन्छ । त्यताका बन्दरगाह प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यताबाट पनि समुन्द्रमा जान सकिन्छ । विश्वसँगको जमिन मार्फतको सम्बन्ध हाम्रो त्यताबाट पनि हुन सक्छ । हामी नहुँदा त्यो काम..इतिहासमा नेपाल यहीँ थियो ।
चीन त्यही थियो । भारत त्यही थियो । नेपाल यहीँ छ, चीन त्यही छ । तर, किन पारवहन र यातायातको सम्झौता किन भएन ? चीनतिरबाट नाका किन खोलिएन ? उत्तरमा अनिकाल पर्छ, अनेक समस्याहरु आइपर्छन, चीनको बाटो प्रयोग गर्ने सम्झौता किन गरिएन ? त्यसका लागि देशको स्वाभिमानलाई, देशको स्वाधीनतालाई, देशको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्ने र प्रयोग गर्ने आँट ती कुराहरु चाहिन्छ । हामीले नै ती काम ग¥यौं ।
धरहरा अब भत्किँदैन
तपाईं हामीले देखेका छौं, मैले अनेक योजनाहरु सुरु गरेको थिएँ, भूकम्पभन्दा पछि । म सरकारबाट हटाइए । त्यसपछि म फेरि चुनाव पछि फर्किएर आउँदा ती कुराहरु जहाँको त्यही जस्ताको त्यस्तै । रानीपोखरी शिलान्यास गरेको पहिलो पल्ट । फर्किएर अर्को पल्ट सरकारमा आउँदा त शिलान्यास गरेको ढुंगो विचरा सुकि राखेको । केही भएको छैन । मै बनाउँछु मेरो धरहरा भन्ने एउटा राष्ट्रिय अभियान लान खोजेको थिएँ मैले ।
३५/३६ करोड कति उठेको थियो । त्यो अभियानको रुपमा जान पाएन । धरहराको खण्डहरु जस्ताको तस्तै । अब केही महिना पछि साथीहरु २२ तला माथि चढेर धरहराबाट काठमाडौं सहर घुमिघुमिकन हेर्नुस् । आनन्दले हेर्नुस् घुमिघुमिकन । हाम्रो इतिहासदेखिको धरहरा । उहिलेदेखिको धरहरा । पटकपटक भत्कियो । अब नभत्किने गरि बनेको छ धरहरा, अब भत्किैदैँन ।
हामी नभएको भए संविधान बन्दैनथ्यो । तपाईं हामीले देखेका छैनौं ? कसरी हामी अडिनु परेको थियो, कसरी हामीले अरुलाई अडाउनु परेको थियो । यदि हामी नभएको भए नाकाबन्दीको सामना डटेर कसले गर्न सक्थ्यो ? कसैले पनि गर्न सक्दैन्थे ।
लोकतन्त्र पहिले खोसियो, मान्छेहरुलाई अहिले अलिअलि झस्को छ । २०१७ सालमा लोकतन्त्र खोसियो । पछि ०५८/०५९ र ०६१ सालमा लोकतन्त्र खोसियो । त्यस्ता झस्काहरु मान्छेलाई छन् तर त्यतिबेला कुखुरा खाने स्याल थियो । कुखुरा खाने स्याल भएका बेला कुखुरा हराए भनेर स्याल नभए पछि अरु कुखुरा हराउँदैनन् । त्यसबेला राजसंस्था थियो । अब राजसंस्था छैन । त्यसकारण यहाँ कसैले खोस्न सक्दैँन ।
अर्को कुरा, त्यसबेला जनता पर्याप्त सचेत थिएन । जनता त्यति संगठित थिएन । जनता एकजुट भएर आन्दोलनमा उत्रिन सक्ने अवस्था थिएन । त्यसैकारण लोकतन्त्र खोसिन्थ्यो । अब जनता सचेत छन्, संगठित छन् । लोकतन्त्र कसैले खोस्न सक्दैन । कसैले लोकतन्त्र खोस्न सक्दैन ।
म साथीहरुलाई आपूmमा विश्वास गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु । तपाईं हामी छदाछदै गणतन्त्र मास्न सक्ने, लोकतन्त्र खोस्न सक्ने, त्यसलाई अल्मलाउन, वर्गल्याउन सक्ने तागत कोही हुन सक्छ ?
म धेरै कुरा केही भनिरहन आवश्यक देख्दिनँ । अहिले मैले केही धेरै पूर्वानुमान गर्नु पनि छैन । तर, अब चुनाव हुन्छ । मलाई प्रचण्डले दिएको हो सदस्यता ?
केही मान्छेहरु किन उत्ताउलिएका हुन्, मलाई थाहा छैन । अहिले चुनाव घोषणा भए पछि मैले प्रचण्डलाई भनेँ, चुनाव घोषणा भएको छ, मिलेर चुनावमा जाऔँ । हाम्रा बीचका अन्तरविरोध थिए भने पनि ती चुनाबले टुङ्ग्याउछ । मिलेर चुनावमा जाऔं । सामना गरौं । उहाँ मान्नु भएन । उहाँहरुले त केपी ओलीलाई पार्टीबाट निकाल्यौं भन्ने घोषणा गर्नुभयो । मलाई उहाँले दिएको सदस्यता हो र ?
म जेलमा हुँदा एउटा आन्दोलन चलिराखेको बेला आन्दोलनमा सरिक भएर हो कि तमासा हेर्दा हो, एउटा कलिलो केटो पनि समातेर ल्याएछ जेलमा । मैले भटाएको थिए । सम्झाएर, बुझाएर, राजनीतिकरण गरेर, बामपन्थी बनाएर अलिअलि काममा लगाइयो । विधार्थी नेता बनाइयो । त्यसमा सुदूरपश्चिमको पनि परेछ ।
म पूर्णकालीक भएको पाँच वर्ष भएको थियो । भूमिगत भएको तीन वर्ष भएको थियो । मोरङ आउँदा विराटनगरमा महेन्द्र मोरङ कलेजमा पढ्दै गरेको एउटा विधार्थी भेटेँ, इमानदार, राम्रो, सहयोगी भावनाको विधार्थी भेटें । उसलाई मैले राजनीतिमा लाग, राम्ररी काम गर्नुपर्छ, देशमा परिवर्तन ल्याउनु पर्छ । सम्झाएँ, उत्साहि गरेँ, प्रेरित गरेँ ।
त्यो मान्छे, त्यसको एक दुई वर्षपछि राजनीतिमा सरिक भयो । पहिले इमानदार, सोझो थियो त्यो मान्छे । पछि बैङ्कमा काम गर्ने मान्छे, त्यसो भएर आदत के परेछ भने उधारो हुँदैन । पछि कपट पसेछ । पहिले जस्तो छैन त्यो मान्छे । मैले धेरै केही नभनौं ।
प्रचण्डसँग एकता गरियो । कमिलालाई काल आयो भने पखेटा पलाउँछ । काल नआउदाखेरि प्वालभित्र बसिराखेको हुन्छन् कमिलाहरु तात्ती नै । काल आएपछि पखेटा पलाउँछ । पखेटा पलाएपछि प्वालभित्र बस्न भएन बाहिर निस्किएर फुर्रफुर्र उड्न थाल्छ । चराहरु घुमिराखेका हुन्छन् त्यही खोजेर, जति फुत्त निस्केर फुर्रर उड्छ ट्याप्प पा¥यो, ट्याप्प पा¥यो, ट्याप्प पार्यो ।
अहिले यिनीहरु फुर्रफुर्र भएका छन् । गाली गरेर हिडेका छन्, मुख छाडेर हिडेका छन् । दुलाबाट फुत्फुत निस्किदै फेटेफेटे गर्दै हिडेका छन् । यो सबै हिसाब, तिनको विगतको हिसाब जनताले राखेका छन् । तिनका जीवनभरिका कामको हिसाब जनताले राखेको छ । तिनका फिटिफिटि जनताले ट्याप्प ट्याप्प ..। यो फुर्रफुर्र अरु केही होइन । त्यसैकारण आत्तिएका छन् । चुनाव भनेपछि सातो गएको छ ।
म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईंहरु आउनुस्, स्वस्थ्य निर्वाचन हुनेछ, स्वच्छ निर्वाचन हुनेछ, निष्पक्ष निर्वाचन हुनेछ, धादलीरहित निर्वाचन हुनेछ, बत्ति निभाइने छैन, मतपत्र च्यातिने छैन.. । चुनावमा आउनुस् । तर, मतपत्र च्यात्छु र बत्ति निभाउछु भन्ने ठान्नु भएको छ भने त्यो पनि हुन दिइने छैन ।
बत्ती निभाउन पाइँदैन । बाक्सा साट्न पाइँदैन । मतपत्र च्यात्न पाइँदैन । यस्तो तमासा लोकतन्त्रमा गर्न पाइँदैन । स्वच्छ निर्वाचन हुनुपर्छ । स्वच्छ निर्वाचन शान्तिपूर्ण ढंगले निर्वाचन हुन्छ । तपाईंहरु आउनुहोस् निर्वाचनमा भाग लिन । नडराउनुस् । अब तपाईंले बबुल रोपेर सुन्तला खोज्नु हुन्छ ।
बबुल भन्ने हुन्छ एउटा मरुभूमिमा काडाँधार केही पनि नफल्ने, चरा पनि बस्दैन । चरा पनि बस्दैन, किन काडैकाडा हुन्छ, कहाँ बस्ने ? काडैकाडा ! त्यसको मुन्टोकुन्टोचाहिँ उँटले खान्छ । उँटका गिजाले मात्रै त्यसलाई धान्न सक्छ । मुन्टोकुन्टो उँटले खान्छ त्यसलाई । त्यो रसिलो, मलिलो ठाउँमा हुँदैन ।
मरुभूमि जस्ता ठाउँमा हुन्छ । रुखा ठाउँमा हुन्छ । अनि त्यो बबुला रोपेर अनि हामी सुन्तला खोज्दा हुन्छ ? उहाँहरुले पनि बबुल रोप्नु भएको छ जिन्गदीभरि । अहिले चुनावमा सुन्तला खोजेर हुन्छ ? त्यसैकारण उहाँहरु डराउनु हुन्छ । लोकतान्त्रिक अभ्यासमा आउनुस् भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु ।
केपी ओली हारेपछि मतपत्र च्यात्ने मान्छे होइन
हाम्रो उद्देश्य स्पस्ट छ । हामी यो पार्टी एउटा सेढीनी जस्तै हो, एउटा बघिनी जस्तै हो । जसले आफ्ना बच्चा माथि, अघिपछि शान्त बस्छ तर बच्चा माथि हमला भयो भने बघिनीले झाप्पु दिन्छ । हामीले जीनव अर्पण गरेर, हाम्रा सहिदहरुले जीवन अर्पण गरेर ल्याएको बडो कठीनले ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, हामीले बडो मुस्किलले बनाएको, लडेर बनाएको संविधान यसमाथि कसैले खतरा पैदा गर्छ भने हाम्रो पार्टीले झाप्पु दिन्छ ।
त्यो कुरा सहैय हुँदैन हामीलाई । हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका निम्ति उभिन्छौं । उहाँहरुले केपी ओली तानाशाह भन्नु भएको छ । एकपटक महाधिवेशन नगर्ने, एकपटक चुनाव नगर्ने, एकपटक प्रतिस्पर्धा नगर्ने, प्रतिस्पर्धा एकपटक पनि नगर्ने, प्रतिस्पर्धासँग डराउने, प्रतिस्पर्धा गर्न पर्यो भने हार्ने, हारेपछि मतपत्र च्यात्ने, त्यो इतिहासबाट आएको हो केपी ओली ?
केपी ओली चुनावबाट आउँछ । संसदीय दलको नेता चुनावबाट भएको हो । झलनाथ खनालजीसँग चुनाव लडेर म संसदीय दलको नेता छानिएको थिएँ । पछिल्लो पटक कसैले लड्ने आँट गरेनन् । माधव नेपालजीसँग ९औं महाधिवेशनमा चुनाव लडेर अध्यक्ष भएको हुँ ।
म आखा देख्दिनथे, ठीक हो । त्यसबेला आँखा देख्निनथे । मेरो दुईवटै आँखामा फुलो परेको थियो । औषधिको कारणले, त्यो हटाए पछि ठीक भयो । उहाँहरुले प्रचार गर्नुभयो यो आँखा पनि देख्दैन । उहाँहरुले प्रचार गर्नुभयो, यो हिड्न पनि सक्दैन । हो, म हिड््न सक्ने थिइनँ । दौडन सक्ने थिइनँ । तर, देश चलाउने भनेको दौड प्रतियोगितमा अगाडि जानेले देश चलाउने हो र ?
म त्यो महाधिवेशनमा अस्पतालबाट सोझै आएर म चुनाव लडिनँ, माधव नेपालसँग । तपाईंहरु चुनाव लड्नु भयो, जिताउनु भयो । म के चुनाव लड्नु, बस्ने बाहेक उठ्न नसक्ने हालतमा थिएँ । समातेर हिडाउनु पर्दथ्यो । त्यो हालतमा थिएँ म । भर्खर हस्पिटलबाट डिस्चार्ज भएर आएको । तपाईंहरुले चुनाव जिताउनु भयो ।
अब फेरि पनि उहाँहरु चुनावमा आउन तयार हुनुहुन्न । उहाँहरु अध्यक्ष मागिरहनु भएको छ, अध्यक्ष चाहियो । अध्यक्ष छोड्दिने हो भने ठीक छ नि त आउनुस् न त चुनाव लडौं । ल म छोड्दिन्छु चुनाव लडौं । चुनाव गर्न आँट गर्नुहुन्न ।
चुनाव हारेको, संविधान सभाको सदस्य, संवैधानिक समितिको सभापति जम्प, अर्को स्प्रिङ बोर्डबाट फेरि अर्को स्प्रिङ बोर्डबाट जम्प, फेरि अर्को स्प्रिङ बोर्डबाट हाइजम्प । कस्तो गजब ! जम्प, हाइजम्प, पुलजम्प ।
चुनाव हारेको मान्छे अन्तिममा पुलजम्म गरेर माथि पुगिराख्या, दुनियाँ छक्क ! त्यस्तो लोकतन्त्र खोज्नु हुन्छ उहाँले । त्यस्तो लोकतन्त्र ! मलाई धम्काएर प्रधानमन्त्री चाहियो । कसरी ? ती झुठा आरोप पत्रको पुलिन्दा पेश गरेर । झुठा आरोप पत्रको पुलिन्दा । लाञ्छनाहरुको पुलिन्दा पेश गरेर ।
म उहाँहरुलाई कुनै लाञ्छना लगाइरहन चाहन्नँ किनभने कसैले नदेखेको भए पो त्यसको नाकमा कालो लागेको छ भनेर मैले भन्नु पर्ने कसैले नाक नदेखेको भए पो भन्नु पर्ने । सबैले देखेको नाकमा मैले भनिरहनु पर्छ, त्यसको नाकमा कालो छ, कालो लागेको छ ? त्यसकारण मैले भनिरहनु पर्दैन सबैले देखेको छ, सबैले जानेको छ ।
हामी समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली त्यो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न दृढ संल्पित छौं । त्यो जनताको सपना हामी पूरा गरेरै छोड्छौं । यसकारण यस बीचमा महाकाली नदीमा यसभन्दा अगाडि कुन सरकारले पुल बनायो ? कुन सरकारले झोलुङ्गे पुल हाल्यो ?
कुन सरकारले पक्की पुल बनायो ? कसले तुइन विस्थापन गर्यो ? म त सुदूरपूर्वको मान्छे, त्यतैका पनि नेता भएका होलान् । त्यतैका पनि प्रधानमन्त्री भएका होलान् । त्यतैका पनि मन्त्री भएका होलान् । त्यतैका पनि गृह मन्त्री, रक्षा मन्त्री भएका होलान् । उपप्रधानमन्त्री भएका होलान, प्रधानमन्त्री पनि विभिन्न मान्छे भएका होलान् ।
यी काम कसले गर्यो ?
महाकाली पुलमा झोलुङ्गे पुल हाल्न मै पुग्न प¥यो त ! अनि विभिन्न बाटोहरुको सञ्जाल बनाउन, बाटाहरु विस्तार गर्न, आयोजना बिग्रिएको थियो भन्लान् । गफ गर्नलाई त कति सजिलो रहेछ, हिजो झलनाथ खनालजीले भाषण गर्नु भयो नि, धरहरा केपी ओलीले बनायो भन्छन्, नचाहिने कुरा । केपी ओलीले बनाएको हो र ? इन्जिनियरले बनाएको हो भनेर ।
उहाँलाई के थाहा रहेनछ भने, इन्जिनियरले डकर्मीको काम गर्दैन, त्यो त नापजोख गर्ने मात्रै हो । डकर्मीले बनाएको हो धरहरा । इन्जिनियरले बनाउँछ, इँटा लगाउँछ, के गर्छ भन्ने परेको रहेछ उहाँलाई । कहिले गएर नजिकै हेरेको भए पो ! त्यो कसले काम गर्छ भनेर हेर्नु पर्यो नि, त्यो थाहा पाउनु पर्यो नि ।
हुनत उहाँहरु त्यसो भन्नु हुन्छ । अहिले ४ हजार ४५ सय किलोमिटर डबल लेन, फोर लेन, सिक्स लेनका बाटाहरु बनेका छन् । अत्तरिया–धनगढीको बाटो ६ लेनको बनेको छ । कोहलपुर–नेपालगञ्ज तपाईंहरुले देख्नु भएको छ । कपिलवस्तु जाने बाटो देख्नु भएको छ । भैरहवा एरपोर्टबाट कपिलवस्तु जाने बाटो तपाईंहरुले देख्नु भएको छ । पथलैया–विरगञ्जको बाटो देख्नु भएको छ ।
बुटवलबाट नारायणगढ आउने बाटो पूर्व–पश्चिम राजमार्ग चौडा गर्दै गरेको देख्नु भएको छ । पूर्व–पश्चिम रेल मार्ग बन्दै गरेको तपाईंले देख्नु भएको छ । उहिले रेल थियो नेपालमा अरे ! अहिलेको समयमा रेल मार्ग बनाएका छौं, रेल किनेका छौं हामीले । रेल सुरु गरेका छौं । अब केही दिनभित्र हामी शिलान्यास गर्दैछौं । पूर्व–पश्चिम रेल बन्दैछ अब ।
उत्तर–दक्षिण रेल बन्दैछ । केरुङ–काठमाडौं बन्दैछ । डीपीआर सकियो, रक्सौलबाट काठमाडौं आउने रेल । विभिन्न एयरपोर्टहरु चौडा हुँदैछन् । धनगढी एयरपोर्ट तपाईंले देख्दादेख्दै राती उड्ने बनाइएको छ । सुर्खेत एयरपोर्ट तपाईंले देख्नु भएको छ । विभिन्न एयरपोर्ट तपाईंले राती पनि उड्ने सुविधा विस्तार, नयाँ एयरपोर्टको विस्तार तीब्र रुपमा तपाईंले देख्नु भएको छ ।
हामीले चाँदनी दोधारामा अर्को सुख्खा बन्दरगाह त्यहाँ निर्माण गर्दैैछौं, औधोगिक क्षेत्र त्यहाँ निर्माण गर्दैछौं ..। यस्ता कामहरु नयाँनयाँ कामहरु भइरहेका छन् । हामीले एकैचोटी, एकैदिनमा ३ सय ९६ हस्पिटल शिलान्यास गर्ने भन्यौं । विभिन्न प्राविधिक कारणले कतिवटा हस्पिटल भोलिपल्ट मात्रै शिलान्यास गर्न सक्यौं । तर, ३ सय ९ वटा हस्पिटल देशभरिमा एकैदिन हामीले शिलान्यास गर्यौं ।
एकैदिन ३ सय ९ वटा, यो ऐतिहासिक रेकर्ड होइन ? २०७२ साल वैशाखमा भुइँचालो गयो । मैले कानून बनाएर, पुनःनिर्माण प्राधिकरण बनाएर काम सुरु गरेको थिए । फर्किएर आउँदा के भएको छ भन्दा केही पनि भएको छैन, जस्ताको तस्तै । अहिले हामीले ७ लाख घर निर्माण गरेर जनतालाई हस्तान्तरण ग¥यौं । ७ लाख घर निर्माण गरेका छौं ।
स्कुल कलेजहरु निर्माण गरेका छौं । स्वास्थ्य चौकीहरु निर्माण गरेका छौं । अस्पतालहरु निर्माण गरेका छौं । स्कुल कलेज मैले भनिसकेँ । विद्यालयका क्षतीग्रस्त, विश्वविद्यालयका क्षतीग्र्स्त भवनहरु निर्माण गरेका छौं । पुरातात्विक महत्वका मठ, मन्दिर, मस्जिद विभिन्नलाई पुनःनिर्माण गरेका छौं ।
तपाईंले सुन्नु भएको छ । १२ वर्षमा आँधीहुरी आएर ८ सय ६९ छाप्राहरु उडायो । अहिले हामीले ट्वाइलेट बाथरुप सहितका ८ सय ६९ पक्की घरहरु बनाएर ती विस्थापित भएका जनताहरुलाई फेरि आवास हस्तान्तरण गरेका छौं । यति तीब्रताका साथ कहिले कसैले गरेको थियो ? यति तीब्रताका साथ कहिल्यै काम भएको थियो ।
कोभिड–१९ यहाँ मात्रै आएको होइन । हामी विकट परिस्थितिमा छौं । यहाँ मात्रै आएको होइन, दुनियाँ भरि आएको हो । तर, हामीले मृत्युदरमा फैलिन नदिने प्रयास एउटा टेस्ट गर्ने अवस्था थिएन यहाँ सुरु हुँदाखेरि । अहिले ६८ ठाउँबाट एकैचोटी २५ हजारको परीक्षण एकै दिनमा हुन्छ ।
त्यो स्थिति हामीले बनाएका छौं । अहिले नियन्त्रण गर्दै मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि घट्दै छ । संक्रमण हुनेको सङ्ख्या पनि घटेको छ र निको हुनेको सङ्ख्याचाहिँ बढेको छ । यो यहाँहरुले देख्नु भएको छ, दिनैपिच्छे यो रिपोर्टहरु आइरहेका छन् । त्यसकारण भ्रममा नपर्न म साथीहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।
हामी काम गर्नका लागि सरकार बनाउने हो, काम गर्नका लागि सरकारमा जाने हो । यो देश विकास गर्ने हो भने, काम गर्ने हो भने हाम्रो नेतृत्वको सरकार चाहिन्छ, हाम्रो पार्टीको सरकार चाहिन्छ । यो कुरा हामीले जनतालाई बुझाउनु पर्छ ।
हामीले भ्रम पाल्नु हुँदैन । रामले लङ्कामा एउटा परिस्थितिमा बाँदर जातका मान्छेलाई लिएर लडाइँ गरेका थिए, एकपटक । बाँदरले नै के के न गर्ने रहेछ भन्ने ठान्नु हुँदैन । बाँदरले कुनै घर बनाउँदैन, बनायो कि भत्काउँछ, बनायो कि भत्काउँछ । कतिवटा भत्कायो….। बनाउने काम गर्दैन, भत्काउने काम गर्छ । अब बाँदर लिएर बस्ती बसाउँछु भन्ने ठानेको कहाँबाट हुनु । बुरुक्क उफ्रियो फेरि । तपाईंले रुखका हाँगामा बसेर विचरा दुख पाएछ भनेर घरमा ल्याउनु भयो भने बस्छ ? बुरुक्क दगुरेर उहीँ रुखमा । त्यो मती.. ।
तपाईं हामीले अब आन्दोलन जोगाउन पर्छ, आन्दोलन जोगाउन पार्टी जोगाउनु पर्छ । हाम्रा उद्देश्यहरु जोगाउन र सफल पार्नका लागि पार्टी जोगाउनु पर्छ, पार्टी विस्तार गर्नुपर्छ । पार्टी फैलाउनु पर्छ । म साथीहरुलाई त्यही आग्रह गर्न चाहन्छु ।
यत्रो साथीहरु, यत्रो विग्न नेताहरु अब आफ्नो ठाउँमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो ठाउँमा फर्किदै हुनुहुन्छ र एउटा अभियान संचालन गर्दै हुनुहुन्छ । तपाईंहरु कि कहाँकहाँबाट कोबाट, कसका लागि, केका लागि कुदेका मान्छे हुन्, कुदाइएका मान्छे हुन् ।
ती मान्छेहरुको कुरा छोड्नुस् । आश मार्नुस्, तिनीहरुलाई बिर्सिदिनुस् । आफ्नो अभियान सम्झिनुस्, आफ्ना उद्देश्य सम्झिनुस् अगाडि बढ्नुस् । केही साथीहरु सपथ ग्रहणमा छुट्नु भएको छ । केही साथीहरु लिस्टमा पनि छुट्नु भएको होला । त्यसको पनि ध्यान दिइनेछ । साथीहरु, यो असन्तुष्ट हुने बेला होइन । चित्त दुखाएर बस्ने बेला होइन । असल कार्यकर्ताहरुले चित्त नदुखाइ, असन्तुष्ट नभइकन काममा होमिने हो ।
कामको मूल्याङ्कन हुन्छ, योगदानको मूल्याङ्कन हुन्छ, इतिहासको मूल्याङ्कन हुन्छ । यथोचित ढंगले फेरि सबै साथीहरुलाई जिम्मेवारी दिइन्छ । त्यसकारण कुनै चिन्ता नगर्न साथीहरुलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु ।
(प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजधानीमा आयोजित कार्यकर्ता भेलामा व्यक्त बिचारको सम्पादित अंश)
प्रकाशित: २०७७ पुष १८ गते १०:५१
भू-राजनीतिको चपेटामा बीआरआई-नयाँ रेशम मार्ग
वामदेव राजनीतिको चरित्र र विचलित चित्र
भात खाइस् !
असार १५ मै किन खाइन्छ दही-चिउरा ?
जबजको आर्थिक चिन्तन
‘बीपी भन्नुहुन्थ्यो’बाट माथि उठेको जबज- देश विकास र कम्युनिष्ट निकासको म्याग्नाकार्टा
असार १५ को लागि दही- केही तथ्य, केही तरिका